Halmaan Hadal Kuma Jiro, ma khaldame waa Eebe Weyne – Rasaasa News
Jul 22, 2009 Jwxo-shiil
Hadii, ay walaalkaa candhuuftaadu gaadho, waa gar in ay gacantaadu tirto si uu qalbigiisu u qaboobo, anana [rasaas.com] waxaanu ka qoomamaynaynaa khaladka naga dhacay.
waxaanu cudurdaar ka bixinayaan akhristayaalka, war aanu dhawaan soo daabacnay oo aanu ku sheegnay in Ugaas Badal Colaad Ugaas Xirsi Cali Qaardheer la dilay. Hadaba, warku sidaas ma ahayn ee Ninka la dilay ayaa ahaa Badal Faarax Xirsi Cali Dhuux oo dhalin yaro, adeerna uu u yahay Ugaaska aanu ku kama,anay, Badal waxaa uu ahaa nin culimo ah oo reer miyi ah, dilkiisana sidii aan hore u sheegnay ayaa waxaa ka dambeeyey ciidan beeleed ka amar qaata Jwxo-shiil.
Waxaanuna mar labaad ka bixinaynaa Cudurdaa Ilaahayna Cimri dheer iyo Caafimaad ha siiyo Ugaas Badal, waxaa kale oo aanu Ilahay u baryeynaa in Janadii Geeyo marxuunka dhintay oo ay dishay gacan ka gardaran.
Waxaa kale oo dhab ah oo isagana dilkiisa la xaqiijiyey Fure Ibraahin Cabdi Daahir, oo lagu dilay Qabridahare meel agtiisa ah, waxaa kale oo jiray nin kale oo isgana lagu dilay Qabridahare oo magaciisa la yidhaahdo Sheekh Maxamed. Dhamaan saddexdan nin ee la dilay labadii todobaad ee ugu dambeeyey ayaa ah hal reer, waxaana dhamaantood dilay Ciidan beeleedka Jwxo-shiil oo iyagu dadweynaha iyo nin qarta ku laaya iyaga oo sheeganaya in ay yihiin ururka ONLf.
Dilka Qarsoon ayaa aad ugu soo badanaya Gabalka Qoraxeey, waxaana gaysanaya ciidan beeleed ka amar qaata Jwxo-shiil. Waxaana bishii ina dhaaftay ay ciidan beeldka Jwxo-shiil ku dileen Aaga Qoxeey in ka badan 7 ruux, Waana arin aan suurto gal ahayn in dadweynaha Somalida Ogadeeniya, gaar ahaana dadweynaha degan labada gabal ee Nogob iyo Qoxaxeey in todobaad walba ay ciidan beeleedka Jwxo-shiil ku dilaan dad aan waxba galabsan.
Hadaba, bal waxaan isha ku hayn doonaa in uu siisocdo waxyeelada ay samaynayaan ciidan beeleedka Jwxo-shiil iyo in kale iyo Jwabaata ay ka bixiyaan dadweynaha degan gabaladaasi.
Reero reer Miyi ah oo ay Mireen Ciidan Beeleedka Jwxo-shiil iyo Ciidanka Xukuumada Eritrea